हरेक अभिभाबकले पढ्नुहोला । मलाइ टेलिभिजन बनाइदेउ - Darsan Post
हरेक अभिभाबकले पढ्नुहोला । मलाइ टेलिभिजन बनाइदेउ
विचार / दृष्टिकोण शिक्षा स्वास्थ्य/जीवनशैली
२१ माघ २०७६, मंगलवार २०:०५ Dpost693LeaveaComment on हरेक अभिभाबकले पढ्नुहोला । मलाइ टेलिभिजन बनाइदेउ
एक महिला एउटा प्राइमरी स्कुल कि शिक्षिका थिइन । बिहान उनिले स्कुलमा बच्चाहरुको टेस्ट लिएकि थिइन । जब टेस्ट
सकेर साझ पख कपि चेक गर्न थालिन उनको आखाबाट आसुका धारा बग्न थाले ।
उनको पति त्यही नजिकै पल्टेर टिभी हेर्दै थिए । आफ्नी
श्रीमती रोएको देखेर उनले प्रस्न गरे के भो किन रोएको?
टिचर (पत्नी) बोलिन : आज बिहान मैले स्कुलमा एउटा
टेस्ट लिएको थिए टेस्ट को लागि शीर्षक थियो “मेरो सबैभन्दा ठूलो इक्ष्या” यहि बिसयमा केही हरफ लेख्न को लागि दिएको थिए । एक बच्चिले एकदमै अनौठो उत्तर दिएकी रहिछन । उनले लेखेकी थिइन “भगवान यति तिमिले मेरो सबैभन्दा ठूलो इक्ष्या पूरा गरिदिन्छौ भने” *मलाइ टेलिभिजन बनाइदेउ**
यो सुनेर उनका पती हास्न लागे अनि भने अरे लाटी एस्मा रुनु पर्ने कुरा केछर बच्चा बच्ची हुन दिमाखमा जे आयो त्यही लेख्छन यो कुन ठूलो कुरा भयोर ?
टिचर भन्छिन : कुरा अझै सकिएको छैन अगाडि सुन्नुस ।
ती बच्चिले लेखेकि छिन कि यदि म टिभी हुन्थे भने घरमा मेरो लागी एउटा खास ठाउँ हुन्थ्यो। अनि मेरा सबै परिवारहरु
मेरो नजिकै रहनु हुन्थ्यो। जब म बोल्न थाल्छु सबैजना चुपचाप मलाइनै सुन्नेथिए । मलाइ कसैले रोकतोक गर्दैन थिए । जब म टिभी हुन्थे त बाबा अफिसबाट फर्केर धेरै थकान महसुस हुदा हुदैपनी मेरो अगाडि आएर बस्नु हुन्थ्यो ।
ममिलाई जब तनाब टेन्सन हुन्थ्यो केही कुराले त्यो बेला मलाइ कराउनु हुदैन थियो अझ मेरो नजिकै आएर बसेर मलाइनै हेरि रहनु हुन्थ्यो । मेरो ठूलो दाइ र बहिनि बिच मसङग को नजिक रहने भन्ने झगडा नै पर्थ्यो ।
यहाँ सम्मकी जब टिभी बन्द रहन्छ तब पनि त्यो टिभीलाइ राम्रो गरेर सम्हालेर राख्नु हुन्थ्यो अनि टिभी को रुपमा म सबैलाइ खुसी दिन सक्थे ।
यति सुनेपछी उनको पतिको मुख बाट यहि शब्दहरु निस्कियो….हे भगवान बिचारी बच्ची…उनको बाबू आमाले त ।
उनिप्रती अलिकती पनि ध्यान दिदो रहेनछन क्यार त्यसैले यो बच्चिले आफ्ना मनका सबै भावनाहरु यहि कपिमा लेखिदिइन जस्तो छ । एस्तो लापरबाही पनि गर्नु हुन्छ आफ्ना सन्तान प्रती ।
उनको आमा बुवालाइ उनिप्रती ध्यान दिन जरुरी छ। सायद ती बच्ची मन भित्र भित्रै टुटिसकेकी होलिन जस्तो छ।
टिचर पत्निले आसुले भरिएको आँखा आफ्नो पतितिर फर्काउदैन भनिन हजुरलाइ थाहा छ त्यो बच्ची को हो ??
पति : मलाइ कसरी थाहा हुन्छ त्यो को हो तिमि त उस्को टिचर हौ तिमिलाइ पो थाहा हुनुपर्ने त एसो गर भोलि तिमि त्यो बच्चिको आमा बुवालाइ स्कुल बोलाएर राम्रो सङग सम्झाउ कि आफ्ना बच्चाहरुलाइ भरपुर माया दिन सक्नुपर्छ अनि उनिहरुलाइ समय पनि दिन जान्नु पर्छ भनेर ।
टिचर पत्नी : हजुर म राम्रोसङग चिन्छु त्यो बच्चिलाइ ती बच्ची अरु कोहि नभएर हाम्रै छोरी हो ।
यो कुरा सुनेर उनको पतिको होस उड्यो केही बेर सोचेर भने सायद सहि भनिन हाम्री छोरिले हामी दुई ठुलो मान्छे बन्ने धेरै पैसा कमाउने लालच मा दिनरात मेहेनत गर्दैछौ । अनि हामिले हाम्रो छोरिको सबै इक्ष्या पूरा गर्न भनेरनै यो सब गरिरहेका छौ
तर कहिले पनि सोचेनौ हाम्री छोरिको पनि केही इक्ष्या रहर होलान हामिले कति पाप गरि रहेका रहेछौ हामिले ठूलो गल्ती गरिरहेका रहेछौ हामिले एस्तोगर्नु हुदैन थियो । आज बाट हामी दुई मिलेर हाम्रो सन्तान हाम्रो छोरिको मनको इक्ष्या पूरा गर्नेछौ ।
“एकपल्ट सोचौ कतै हामि पनि आफ्नोलागी मात्र बाची रहेकात छैनौ सन्तान को इक्ष्या बुझ्न कतै भुलेकोत छैनौ”
नीजि भन्दा कम छैनन सरकारी विद्यालय
विद्यालयले आफ्ना छोराछारीलाइ मनरोगी त बनाउँदै छैन ?
कुनै पनी केटालाई फेसबुकबाट चिनेकै भरमा विश्वास गरी आफ्नो इज्जत लिलाम नगर्नुस् दिदीबहिनीहरु
१ चैत्र २०७६, शनिबार २०:२१
माया र मजाक हरकोहि सँग गरिदैन ।
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार १६:५३